यस लोक कलाकार को छाल के हो?
हाम्रो देश सधैं प्रसिद्ध कलाकार, सबै ट्रेडों को कारीगरों छ। सामान्य सामाग्री को तिनीहरूले घरेलू लागि कला यी कामहरू, साथै कुराहरू सिर्जना गरियो। आज भन्दा भूल यी शिल्प, र कि पर्यटक उद्योग मा काम, बाँकी ती। शिल्प यात्री दुनिया को सबै कुनामा घर लिन मुख्य स्मृति चिन्ह हो।
रूस मा, लामो लोकप्रिय भएको छ सन्टी छाल देखि उत्पादनहरु। छाल के हो? सार मा, यो बाहिरी भाग, सन्टी छाल माथि पत्र। यसको बाहिरी पर्खाल, सामान्यतया, सेतो अलिकति grayish छ। तर त्यो पनि एक pinkish-खैरो फेला परेन। पहेंलो देखि खैरो यो सामाग्री दायरा को भित्री तहहरू।
त्यो सन्टी छाल को छन्? यो प्रश्न कुनै पनि विद्यार्थी जवाफ सजिलो छ। सबै को पहिलो, यो एक परम्परागत किसान जूता छ - जुत्ता। र अझै - बास्केट, बक्स, भाँडा, विभिन्न बर्तन, हतियार भागहरु। साथै, Kievan रस 'यो लेख्नका लागि कागज रूपमा प्रयोग गरिएको थियो: प्रसिद्ध birchbark पाण्डुलिपिहरूमध्ये फिर्ता एघारौँ गर्न मिति - पन्ध्रौँ शताब्दीमा।
त्यसैले, एल्म के हो, बुझे। तर किन यो यति लोकप्रिय मान्छे थियो छ? किनभने यो एकदम सजिलो, र किफायती प्लास्टिक सामाग्री छ कि गर्मी राम्रो र breathable धारण। प्रशोधन मा सरल र unpretentious छ, तर अझै पनि चिस्यान र चिसो बाट उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान गर्दछ। तसर्थ, यो केवल जूता गरे, तर पनि आफ्नो माछा मार्ने डुङ्गा छोट्याउन। सन्टी छाल बनेको विशेष कन्टेनर सुक्खा उत्पादन, र पनि दूध भण्डारण थिए।
धेरै रोचक के मात्र एल्म, तर पनि यसलाई को वस्तुहरु कसरी सजाउनु गर्न। यो सामाग्री व्यापक मात्र होइन रूस मा प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले हरेक क्षेत्र, हरेक जातिलाई सजाय उत्पादनहरु यसको आफ्नै परम्परा थियो। सबै समय मा लोकप्रिय slotted गरिएको र openwork नक्काशी, सजिलो नक्काशी मुद्रांकन, चित्रकला, र मूल scraping multilayer बुनाई देखिन्छ।
बर्च छाल - प्राकृतिक, वातावरण मैत्री पनि जंगल मा mined गर्न सकिन्छ कि सामाग्री। तर, यसको संग्रह लागि केही नियमहरू छन्: संयंत्र आफ्नो निदाउनु देखि उठ्दै छ र यो मा रस सार्न सुरु गर्दा रूख को छाल मात्र वसन्त मा हुन सक्छ कटौती। हाम्रो अक्षांश मा मई र जुन क्रमशः लागि विशिष्ट छ, र त्यसपछि जंगल मा जाने छ।
छाल के हो? यो न्यानो स्पर्श गर्न छैन मात्र होइन चिसो जो, तर पनि, काठ को नजर सकारात्मक ऊर्जा छ। धेरै मान्छे, कि शान्त दावी काग को लेख को हात मा poderzhat पछि सकारात्मक गर्न मिलाउँछ। छाल को रिम, रक्तचाप normalizes थकान relieves। र यसको उपस्थिति किनभने यो गरे र हात द्वारा सजिएको थियो, सधैं अद्वितीय छ।
पहिले सबैले आफ्नो हातमा सन्टी छाल देखि उत्पादनहरु बनाउन सक्षम थियो। त्यहाँ यस्तो इच्छा छ भने आज, यो प्राचीन तर एकदम uncomplicated शिल्प, सिकेका गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, यो केही सिप, धैर्य, र एक अनुभवी शिक्षक हुनेछ, र पहिलो उत्पादन शायद एक कृति सकिन्छ। तर काम प्रक्रिया अर्डर विचार मा, गर्नेछन् Basics तपाईं फिर्ता ल्याउन, धेरै खुशी तपाईं ल्याउनेछ। र समय, को कौशल वृद्धि हुनेछ, र साथीहरू गर्न आग्रह गर्दै छन्, र तिनीहरूलाई लागि परम्परागत रूसी शिल्प।
घरमा चाँदी कसरी सफा गर्न
माछा मार्ने को तरिका Bombard: सामान र उपकरण
जाडोमा ब्रेम लगाउँदै - बियर पिउन, तर हामी बुझ्न सक्छौं!
आफ्नै हातले रूख देखि जहाज को पूर्वनिर्मित मोडेल। काम विवरण, रेखाचित्र
फिडर मा आक्षेप पक्रने
नवजात शिशुहरु कसरी नुहाउने गर्न। नयाँ आमाबाबुको लागि निर्देशन
वीर्य विश्लेषण मा Agglutination: के?
कान पानी उजागर गरिएको छ भने, यो मामला मा के गर्न?
के बाट एडी संग जूता लगाउन?
मरुभूमि द्वीप: बच्न कसरी र आतंक छैन
आदम Brody (आदम Brody): Filmography र व्यक्तिगत जीवन
मासु र दुग्ध नस्ल गाई
खैरो आँखा लागि सुन्दर मेकअप - को कार्यान्वयन मा सल्लाह
छोराछोरीको हिप dysplasia - चासो लागि एक महत्वपूर्ण कारण